वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरको तलब कति ? [सूचिसहित] – Annapurna Post News
वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरको तलब कति ? [सूचिसहित]
May 21, 2022 sujaLeaveaComment on वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरको तलब कति ? [सूचिसहित]
काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारहरूले तोक्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले प्रत्येक प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेका छन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा गाउँपालिकाका सबै बैठक भत्ता प्रति बैठक ५ सय रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको यात्रा विमा गर्ने गरेको छ। जसअनुसार पदाधिकारीको प्रति यात्रा विमा १० लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
-नागरिक दैनिकबाट सेवा सुविधा तथा भत्ता छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ, जसअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब सुविधा मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ६ हजार तथा सभाका सदस्यको मासिक ५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
दैनिक भ्रमण भत्ता नगरप्रमुखको २ हजार, उपप्रमुखको १ हजार ८ सय तथा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा नगरसभा सदस्यको १ हजार ६ सय कायम गरिएको छ। विदेश भ्रमणमा गएका बेला दैनिक खर्च नगर प्रमुखको दैनिक १ सय ५०, उपप्रमुखको १ सय ४०, तथा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा सभा सदस्यको १ सय २५ रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
बन्धक बनाएर बारम्बारको बलात्कारपछि उच्च रक्तस्रावले महिलाको मृत्यु
May 9, 2022 May 9, 2022 suja